किन भारतीयहरूले खाना पकाउँदै हरियो खोर्सानी काट्छन् - PAMPEREDPEOPLENY.COM - स्वास्थ्य
किन भारतीयहरू खाना खान्दा हरियो खोर्सानी खान्छन्
घर स्वास्थ्य पोषण पोषण ओआई-प्रवीण द्वारा प्रवीण कुमार | अपडेट गरिएको: शुक्रवार, २ June जून, २०१,, १०::47 [IST]
भारतीयहरुलाई खोर्सानी मन पर्छ! हामी मध्ये धेरैलाई सामोसा, भडा पाव इत्यादि जस्तै खानाहरू मिर्ची काट्ने बानी छ। कसैलाई बिर्यानीको साथ तातो मिर्ची काट्न मन पर्छ र कसैलाई रोटी र साबजीसँग मिर्ची चबाउन मन पर्छ।
तर पर्खनुहोस्! के हरियो खोर्सानी स्वास्थ्यको लागि खराब छ? होइन। यो राम्रो छ किनकि यसले धेरै स्वास्थ्य लाभहरू प्रदान गर्दछ। हरियो खोर्सानीले तपाईंको खानालाई स्वादिष्ट बनाउँदछ र तपाईंको स्वास्थ्यलाई बढाउँदछ। त्यसकारण शताब्दीयौंदेखि मिर्च भारतीय खानाको एक हिस्सा रह्यो!
यसले भिटामिन ए, सी, के र ई समावेश गर्दछ। यसले पोटासियम, म्याग्नीशियम, तामा र फलाम जस्ता खनिजहरू पनि प्रदान गर्दछ।
सावधानी: हरियो खोर्सानीको अत्यधिक सेवनले अल्सर र ईन्फ्लेमेसन निम्त्याउन सक्छ।
यो अधिक लार जारी
हरियो खोर्सानीको विचार मुख-पानी छ, सही छ? लारले पाचनलाई बढावा दिन्छ। जब तपाईंले तत्काल खोर्सानी टोक्नुहुन्छ, तपाईंको मुखमा लार स्राव हुन्छ।
जब खाना चबाउने क्रममा लारसँग राम्रोसँग मिसिन्छ, तपाईंको पाचन प्रणाली राम्रोसँग काम गर्दछ।
यो विषाक्त पदार्थ बाहिर फ्लश
हरियो खोर्सानी कब्ज रोक्छ। तिनीहरूले मल त्याग गर्न उत्प्रेरित गर्न र शरीर बाहिर विषाक्त पदार्थहरु धक्का मद्दत गर्न सक्छन्।
यसले मुडलाई बढावा दिन्छ
खोर्सानीको काटनेले तपाईंको बोलीलाई मात्र असर गर्दछ, तपाईंको जिब्रोलाई मात्र होइन! खोर्सानीले क्याप्सैसिन समावेश गर्दछ जसले एन्डोरफिनहरू रिलीज गर्दछ जुन राम्रो मुहार हो जुन तपाईंको मुडलाई बढावा दिन्छ। वास्तवमा त्यो एउटा कारण हो किन मानिस खोर्सानीको प्रेममा पर्दछन्।
खोर्साहरूले रोग प्रतिरोध क्षमता पनि सुधार गर्दछ
खोर्सानीमा भिटामिन सी हुन्छ जसले तपाईंको प्रतिरोध क्षमतामा राम्रो गर्छ। हामी मध्ये धेरैले केवल सिट्रस फलहरू भिटामिन सी को स्रोतको रूपमा सम्झन्छौं तर तपाईले त्यो सूचिमा खोर्सानी पनि थप्न सक्नुहुन्छ।
खोर्सानी तपाईंको आँखाको लागि पनि राम्रो हो
त्यसमा भिटामिन सीले तपाईंको आँखाको दृष्टि सुधार गर्दछ र आँखासँग सम्बन्धित केहि मुद्दाहरूलाई रोक्न मद्दत गर्दछ।
हरियो खोर्सानीको बारेमा कम ज्ञात तथ्य यो हो कि यसले हड्डीको स्वास्थ्य बढाउन, टिश्यु मर्मत गर्न र रगत कोषको उत्पादनमा सहयोग पुर्‍याउन सक्छ।
हरियो खोर्सानीले रगतमा चिनी नियन्त्रण गर्न, संक्रमण (एन्टि-ब्याक्टेरियल गुणहरू) लाई कम गर्न र कोलेस्ट्रोलको स्तर कम गर्नमा मद्दत गर्दछ।
कसरी चमक अनुहारको लागि तपाईंको अनुहार मालिश गर्ने
छालाको लागि सुन्तलाको बोक्रा पाउडर कसरी प्रयोग गर्ने
कसरी तपाईंको घरमा छेपारोलाई मार्ने
चम्किलो छाला र निष्पक्षताको लागि घरेलु उपचार
हिन्दीमा एडम र पूर्वसन्ध्याको कथा
भारतीय संस्कृत बच्चा केटाको नाम आधुनिक छ